Isiphuzo samanzi okuphuza → Indlu • Efulethini • Izakhiwo zaseWarawaw
Ngabe udinga isitsha sokuhambisa amanzi ekhaya? Inkampani yaseWater Point iyanikezela abahambisa amanzi ngaphandle kwamabhodlela, abaphuzayo, Umthombo wabaholi bomhlaba embonini, esingaba ngumhambisi kuphela ePoland.
Dom yindawo lapho sichitha khona isikhathi sethu esiningi. Sifuna ukuzizwa kahle futhi siphephile lapha. Kulapha lapho silungisa khona ukudla, ukuphumula futhi kuvame nokusebenza. Zonke izinsuku ekhaya, kanye nomndeni nabangane, siphuza izingilazi zamanzi eziningi. Ngakho-ke silindele amanzisisebenzisa kwakuhlanzekile futhi kunempilo futhi sinambitheka okwehlukile. Ukunethezeka kanye nokulula kokuthola lamanzi anjalo kuzonikezwa thina isitsha sokuphuza amanzi sasekhaya.
Ukufinyelela njalo kumanzi amasha kusuka ku-dispenser, mahhala ekungcolisweni kwamagciwane kanye namakhemikhali, kuzosivumela ukuthi sihlale siphilile isikhathi eside futhi ngaphezu kwalokho sinakekele indawo yethu ngokunciphisa inani lemfucuza, i.e. isetshenziswe futhi ilahle amabhodlela amanzi.
Isisebenzi sokuhambisa amanzi esisebenzayo nesimanje kulezi zinsuku sibalulekile ekhaya futhi senza impilo ibe lula, ngoba asikho isidingo sokuthenga amanzi asebhodleleni bese sichitha amandla onawo. Ukunciphisa inani lemfucuza ekhiqizwa ekhaya lethu nakho kuyinto ebalulekile yokunakekela imvelo yemvelo.
Ukuphuza njalo amanzi amasha ahlanzekile kuthuthukisa impilo yethu futhi kuthuthukisa izindlela zokudla ezifanele kumalungu omndeni omncane.
Ngenxa yesitsha sokuphuza amanzi, ungalungisa hhayi kuphela amanzi amnandi, kepha futhi uvuselele i-lemonade noma amanzi akhazimulayo, futhi ukwakheka kwesimanje kwalesi sixhobo kuzogcizelela ukubukeka kwanoma yiliphi igumbi.
Ukudonswa kwamanzi emzimbeni kuthuthukisa ukumelana nomzimba ezifweni, kufaka phakathi izifo ezibangelwa amagciwane, ngoba ulwelwesi lwe-mucous oluthambile lwamehlo, ekhaleni nasemlonyeni luyisithiyo esisebenzayo sama-microorganisms we-pathogenic ashlasela thina. Ukuphuza amanzi anempilo futhi ahlanzekile nakho kunomthelela omuhle ekubonakaleni kwesikhumba sethu futhi kubambezela inqubo yokuguga kanye nokuvela kwemibimbi. I-hydration efanele yomzimba ithinta ukuqina kwesikhumba okufanele, okuvikela umzimba wethu ngokwemvelo.
Amanzi asemzimbeni wethu yilawa:
-Ukukhokhela izakhamzimba ezinikezwe umzimba wethu kanye nokudla
- into eyingxenye yezicubu zethu
-Lawula ukusebenza okufanele kwezitho zomzimba, kubandakanya nengqondo
- Umlawuli wokushisa komzimba
Unalokhu engqondweni, khumbula ukuphuza cishe amalitha ama-2 amanzi ngosuku. Kubaluleke kakhulu kubantu abathatha imishanguzo futhi bahlushwa yizimo ezahlukene zokwelashwa.
Kodwa-ke, isidingo samanzi wezinsana nezingane ezincane sikhulu kakhulu. Izingane kufanele ziphuze amanzi amsulwa angenawo amaminerali ngaphandle koshukela, ukunambitheka kanye nodayi.
Lezi yizizathu zokuthi kungani kufanele ucabangele ukuthenga isengezo samanzi okuphuza ekhaya lakho noma efulethini, ngoba kuqinisekisa ukufinyelela okuqhubekayo emanzini anjalo ahlanzekile futhi anempilo. Kuzoba yinto esebenzayo kakhulu yemishini ekhishini.
Iziphuzo zokuphuza amanzi zivumela ukulungiswa okunempilo kokudla neziphuzo zomndeni wonke. Lawa madivayisi ayoba lula futhi kube mnandi ukuwasebenzisa yiwo wonke umuntu, ngisho nelungu lomndeni elincane kunawo wonke, ngoba libhekene nokusebenza nokuqina.
5 / 5 ( 17 amavoti )
izihambisi zamanzi ezingeyona isilindaamanzi ashisayo asendlini endlini yomndeni owodwaamanzi ashisayo endliniamanzi ahlanzekile ompompiamanzi amahhala ekhayaukunikezwa kwamanzi ekhayaisitsha samanzi sasekhayaintengo yokusabalalisa amanzi yasekhayaukubuyekezwa kokuhambisa amanzi wasekhayaisitsha samanzi seWarsaw yasekhayaisitsha sokuhambisa amanzi se-carbonated sekhayaisitsha sokuhambisa amanzi se-carbonated seWarsaw yasekhayaisitsha samanzi sasekhayaisitsha samanzi efulethiniizitsha zamanzi eziphuza ekhayaizitsha zamanzi entwasahloboamanzi e-carbonatedamanzi e-carbonated ekhayaamanzi ashisayoukuphathwa kwamanzi ekhayaokuhambisa amanzi endluamanzi athambile ekhayaiqonde empompiniamanzi alukhuni endlininamanzi uqobo ekhayaamanzi endliniamanzi akhazimulayo ekhayaamanzi amaminerali ekhayaukuphuza amanzi ekhayaamanzi anongiwe ekhayaamanzi kashukela ekhayaamanzi endliniamanzi ekufakweni kwendluamanzi angaphansi endlini entshaamanzi anempilo ekhayaamanzi enempilo ompompiamanzi abandayoamanzi entwasahlobo ekhaya
Bona ezinye izigaba: